Wholesale Promotional Custom Luxury Soy Wax Makenduru Makenduru Chipo Set fekitari uye vagadziri | Winby
kenduru chipo chakaiswa
Yekusimudzira Tsika Yakasarudzika Soy Wax Makemikari Makenduru Chipo Set
YEMAHARA SOY AROMATHERAPY Makenduru: pisa 45 ~ 50 maawa zvakaenzana kupisa nguva isina hutsi hutema. Nyowani uye inotapira kunhuwirira kweimba, yakasarudzika, inozorodza uye inofadza.
Kunhuwirira kwacho kunofadza uye kunonyaradza, uye dhizaini yacho yakanakisa. Isu tine yedu hwekunhuhwirira runyorwa uye tine mazana ekunhuwirira kuti iwe usarudze.
Kukura: L10.3cm * W10.3cm * H12.2cm
Kunhuwirira: Lavender, Vanilla, Strawberry, Rose, nezvimwe.
Mutsva wekuuya wega logo matte girazi inonhuhwirira kenduru chipo chakamiswa
Makenduru eAromatherapy akagadzirwa nemafuta akakosha uye wakisi yesoya, iyo inogona kusunungura zvachose kunhuwirira pasina chero zvakasara zvakasara. Inogona kushandiswa kugadzirisa kushushikana, kugadzirisa kurara, uye kuchenesa mweya wemukati.
Makenduru anonhuwirira makenduru anogona zvakare kushandiswa sekushongedza imba. Aya makenduru anonhuwirira zvipo zvakanaka zvemhuri yako neshamwari kana kunyange iwe pachako. Inogona kuve zvipo zvekuzvarwa, zvipo zveKisimusi, zvipo zveZuva raValentine, zvipo zvekushongedza imba, zvinodikanwa zvepamba.
Iyi kenduru inonhuwirira inofananidzwa nechipo chakanyanya kunaka. Panguva imwecheteyo, muvharo wekenduru yegirazi kenduru inoshandisa chivharo chesimbi yemhando yepamusoro, iyo inowedzera zvakanyanya magadzirirwo echigadzirwa ichi.
Chigadzirwa zita Simbi tangi magaba
Saizi D7cm * H4.9cm
Mashoko chemhando yepamusoro tinplate zvinhu
Muvharo Chivharo chesimbi
Ruvara Mapatani akasiyana uye mavara
tinoshandisa zvinopfuura zana mhando yezvinonhuwira zvakasarudzwa zvemakenduru. Isu hwekunhuhwirira vatengesi ndivo veCPL hwema uye Firmenich. Ivo vese vari pamusoro mhando dzevanopa hwema munyika. Izvi zvinonhuwira zvinowanikwa kuburikidza nekunhuhwirira pamwe nemafuta akakosha, uye zvinokubatsira iwe kugadzira anonyaradza ambiance. Kune hwema, isu tinogona kupa akasiyana anonhuwirira sezvaunoda. Kana iwe uchida kunhuwa kwakasimba, unogona kusarudza 10% mafuta mukenduru; kana iwe uchida kunhuwirira, unogona kusarudza 5% mafuta mukenduru.
Pashure: Anoshongedza 4OZ simbi gaba magaba ekugadzira makenduru
Zvadaro: Kupisa kutengesa frosted girazi kenduru zvirongo zvine muvharo